Cali Cabdalla Saalax oo "lagu dilay" dagaal ka dhacay Yaman - BBC News Somali
Cali Cabdalla Saalax oo "lagu dilay" dagaal ka dhacay Yaman
Image caption Cali Cabdalla Saalax wuxuu xuutiyiinta la saftay ka dib markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Yaman, sannadkii 2015-kii.
Xalay, magaalada Sanca waxaa ruxay duqeynta ay geysanayaan dowladaha uu hor kacayo Sacuudiga, waxaana lala eegtay Xuutiyiinta. Sidoo kale dagaal dhulka ah ayaa la isu adeegsaday hub culus. Hay'adaha gargaarka waxay sheegeen in shacab badan ay ku go'doomeen meesha uu dagaalka culus ka socday.
Muuqaal aan la xaqiijin oo baraha bulshada lagu baahiyay wuxuu muujinayaa mayd la sheegay in uu Saalax yahay oo lagu waday busta gaduudan. Waxaa siday rag hubeysan oo ku qeylinayay "Allahu akbar" iyo "Cali Cafashi-yoow!" - taas oo ay ula jeedaan qabiilka uu ka soo jeedo.
Xuutiyiinta oo doonayay in ay go'aan Shiicada Zaidi ee laga badan yahay, ayaa Saalax la dagaallamay, laga soo billaabo 2004 illaa 2010-kii.
Maqal Soomaalidii ka badbaaday duqeyntii doonta Yaman oo dalkooda dib ugu laabanaya
Maqal Maxay soo kordhin kartaa xayiraada lagu soo rogay Yemen